Maamulka Waxbarashada Muqdisho oo Cumar Filish lagu wareejiyay – news
Maamulka Waxbarashada Muqdisho oo Cumar Filish lagu wareejiyay
Munaasabad lagu qabtay Maanta magaaladda Muqdisho, oo uu kasoo qeybgalay sii-hayaha xilka Ra'iisul Wasaaraha Mahadi Maxamed Guuleed ayaa Cumar Filish kula wareegay maamulka Waxbarashadda Caasimadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Waxbarashadda Xukuumadda xilka sii haysa C/llaahi Goodax Barre, ayaa ku wareejiyay Maamulka Waxbarashada Caasimadda duqa Muqdisho Cumar Filish kadib munaasabadda maanta ka dhacday magaaladda.
Ujeedada waxaa lagu sheegay in laga duulayo nidaamka Federaalaynta dalka iyo in gobolku qaato mas'uuliyadda waxbarashada, iyadoo Maamul kasta oo dalka ka jira loo madax bannaaneeyay nidaamka dhanka waxbarashada iyo qaadista Imtixaanaadka marka laga reebo midka midaysan ee shahaadiga ah.
Gudoomiye Cumar Filish ayaa soo dhaweeyay in Maamulkiisa la wareegay Waxbarashadda Muqdisho, isagoo tilmaamay in qorshahan uu yahay mid mudo hal sano kasoo shaqeynayay, islamarkaana wasaaradda Waxbarashadda ay ugu dambeyntii fulisay.
Ma jiraan mas'uuliyiin sare oo ka qeybgashay musaanabadda, sida Farmaajo oo qeyb ka ah is-bar bar yaaca ka jira Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya.